नयाँ पत्रिका बैतडी
२०७७ असार ३० मंगलबार १०:०५:००
नयाँ पत्रिका, बैतडी
बैतडीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहरिएका दुई शिक्षकलाई तलब दिएको खुलेको छ । जिल्लाको दोगडाकेदारस्थित बटैराज प्राथमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक रतनसिंह भण्डारी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भए पनि निजलाई कारबाही गर्नुको साटो तलब–भत्ता दिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टेकसिंह भण्डारीको सहमतिमा प्रधानाध्यापक भण्डारीले ८३ हजार एक सय रुपैयाँ लिएको खुलेको छ । सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेकाले अख्तियारले सो रकम असुलउपर गरी पाउन भन्दै सोमबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ को दफा १७ बमोजिम कसूर गरेकोले तत्कालीन प्रधानाध्यापक भण्डारी र अध्यक्ष भण्डारीबाट बिगो असुलउपर गर्न अख्तियारले माग गरेको छ ।
यस्तै, जिल्लाको दोगडाकेदारमै रहेको जशलिंग प्राविका तत्कालीन शिक्षक महानन्द कपाडीलाई पनि नियमविपरीत तलब खुवाएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले गरेको छानबिनमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएका कपाडीलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवराज कपाडी र स्रोतव्यक्ति हरि नाथको सहमतिमा रु. ८१ हजार नाै सय तलब खुवाएको पाइएको छ ।
सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कपाडी, स्रोतव्यक्ति हरि नाथ र विद्यालयका तत्कालीन शिक्षक कपाडीबाट सो रकम असुलउपर गर्न विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
दोगडाकेदार गाउँपालिका–३ श्रीकोट घर भएका शिक्षक कपाडी र दोगडाकेदार–४ का शिक्षक भण्डारी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ०७४ असार १५ मा जेल परेका थिए । दुई वर्ष कैद सजाय र रु. ८२ हजार जरिवानासहित जेल परेका दुवैजना २०७५ जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जेलमुक्त भएका थिए । उनीहरू ६४ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि ०७५ सालमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा छुटेका थिए । उनीहरू दुवैजनाले दोगडाकेदार गाउँपालिका–३ श्रीकोटकै अर्जुनसिंह विष्टको हत्या गरेका हुन् ।
#जेल # शिक्षक # तलब
होटेलमा परीक्षा लिने तीन शिक्षक पक्राउ
प्रचण्ड–नेपालको राजनीति बाँचुञ्जेल अध्यक्ष हुने राजनीति मात्र हो : प्रधानमन्त्री (भिडियोसहित)